Uhlelo lokusebenza olulodwa, zonke izinto imali - BancaNEO
Uhlelo lokusebenza olulodwa, zonke izinto imali
Izixazululo zanoma yiziphi izidingo
Thuthukisa umsebenzi wakho ozimele. Xhumanisa i BancaNEO i-akhawunti nekhadi kuphrofayela yakho yesikhulumi esizimele
Izinkokhelo ezihlakaniphile phesheya. Khokha futhi ukhiphe imali kunoma iyiphi indawo emhlabeni jikelele
Ukuba i-expat kulula. Zuza ekudluliselweni nasekuguquleni okungenazihibe
VULA I-AKHAWUNTI YOMUNTU
Thola ikhadi olilawulayo
Izinhlelo zamanani ezenzelwe wena
Thuthukisa ukudluliselwa kwamazwe ngamazwe nge-SWIFT
I-SWIFT ehlukile ye-akhawunti yakho
Ukuthengiselana ngezimali ezingama-38
Ngaphezulu kwamazwe ayi-100 asekelwayo
Ayikho imali efihliwe
Thola okuningi emalini yakho ngaphansi kwezindleko zekhofi.
Ukuvulwa kwe-akhawunti kwamahhala (kumhlali wase-EU)
I-iOS ne-Android App: Chitha usebenzisa ifoni yakho
€ 4,99	Imali Yesondlo
Thola i-akhawunti yakho ye-NEO Standard
Thuthukela endleleni yokuphila yomhlaba wonke nge-NEO Plus futhi uthole ukuzethemba ongakusebenzisa.
Zonke izici ze-NEO Standard
€ 9,99	Imali Yesondlo
Thola i-akhawunti yakho ye-NEO Plus
Zonke izici ze-NEO Plus
€ 14,99 Imali Yesondlo
Thola i-akhawunti yakho ye-NEO Smart
Sithobela izindinganiso eziphakeme kakhulu zokuphepha ze-EMI ukuze sigcine imali yakho nedatha yomuntu siqu iphephile. Imali yekhasimende igcinwa ku-akhawunti ehlukanisiwe ne-National Bank of Lithuania.